MAHAFINY Simhangar RWD-8 PWS FSX & P3D - Rikoooo
Mpanoratra: Simhangar Team, Lukasz Kubacki, Michal Puto
RWD-8pws ho an'ny FSX & P3D ny kalitao avo sy ny hatsarana. Ny fiaramanidina dia mitondra ny loko loko avy amin'ny CWL Dêblin (sekolin'ingam-pandeha). Noforonina tamin'ny FSXSDK. Midika izany fa tokony hanana taham-pamokarana tsara ianao. Ankoatr'izay dia hiasa ao amin'ny modely DirectX 10 izy ary tsy misy olana. Mibontsina ny endriny sy ny endriny manokana toy ny: Maps manokana sy Maps matetika. Mariho fa noho ny fifehezana ny cocknit 3D dia tsy mampihetsi-tena ny VC izy.
Ny voalohany naorina 3D modely ho an'ny miaramila hifehy Polonina Mod miorina amin'ny Targetware sim maotera. Ity fiaramanidina no RWD-8pws dikan. Na izany aza, dia nanampy sivily vitsivitsy loko tetika ny RWD-8 dwl, koa (jereo etsy ambany). Mariho, fa mbola PWS dikan-3D modely.
Famoahana RWD-8 azo jerena ao amin'ny FSX/P3D pack:
RWD-8pws, Centrum Wyszkolenia Lotniczego (CWL) Deblin, tapaky ny volana 30 ny, Polonina RWD-8pws, romanianina Air Force, tany am-boalohany ny 40
RWD-8pws, Training ambany fiadidiako, 1st Air rezimanta, Warsaw, Polonina RWD-8pws, Gen. Franco Tafik'i, Espaina, tara 30 ny.
RWD-8pws, 6th Air rezimanta, Lwow, Polonina RWD-8pws, Luftwaffe fitsapana, tany am-boalohany ny 40.
RWD-8dwl, sivily firaketana SP-ZHP, Bielsko Aleksandrowice aerodrome (EPBA), Polonina RWD-8dwl, sivily firaketana VQ-Pak, Jiosy fiaramanidina orinasa "Aviron", tany am-boalohany ny 40, Palestina.
RWD-8dwl, sivily firaketana SP-BLC, Warsaw Aero Club, Mokotow aerodrom RWD-8pws, Sovietika Air Force, tany am-boalohany ny 40
RWD-8pws, Hongroà Air Force, tany am-boalohany ny 40
Jereo koa: Hahita "Ordinatera Paintkit" ao amin'ny FSX/ SimObjects / Aircrafts / Ordinatera RWD_8pws. Ny pensilihazo dia misy loko telo .PSD miaraka amin'ny sora-baventy rehetra ilaina hanamboarana ny sasany.
Vakio tahirin-kevitra ahitana
Ity lahatsary ity dia mampiseho ny unterminated Alpha pirinty, mariho fa ny modely Azo alaina ao amin'ny Rikoooo dia tanteraka sy tsara kalitao.